အရွယ်ရောက် ZR-1008 ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ်စက်ရုံအတွက် Tie-dye Ballet Leotard အသစ် Fitdance ဘဲလေးစက်ရုံ။
အဝတ်အစား || စကတ်
ဘဲလေးအ ၀ တ်အစား
နေအိမ် > အထွေထွေ > အရွယ်ရောက် Leotard > အရွယ်ရောက် ZR-1008 အတွက်အသစ်ချည်ထားသောဘဲလေး Leotard
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် pancake Tutu
pancake tutu လေ့ကျင့်ပါ
အရွယ်ရောက် ZR-1004 အတွက်အသစ်ချည်ထားသောဘဲလေး Leotard
အရွယ်ရောက် ZR-1008 အတွက်အသစ်ချည်ထားသောဘဲလေး Leotard
ဤသည်သီးသန့်လည်စည်း - ဆိုးအထည်များနှင့်လုပ်သောစျေးကွက်အပေါ်လူကြိုက်အများဆုံး leotard ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်သူမှလှပသောအမျိုးသမီးများ၏ကွေးညောင်းမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ အပေါ်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်ကောင်းသည်၊
ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များအရပိုမိုကောင်းမွန်သောအလှအပအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အတွက် ၀ တ်စုံအရောင်ခြယ်ပစ္စည်းနှင့်ကိုက်ညီရန်သင့်အားစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အရောင်ရွေးချယ်ထားသောအင်္ကျီရှည်များကိုသင့်အားပေးမည်။ သင့်တွင်ကလေးများ၏အဝတ်အထည်လိုအပ်ချက်ရှိပါကအရွယ်အစားဇယားအတိုင်းသင့်လျော်သောအချက်အလက်များကိုလည်း ပေး၍ သီးသန့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Parameters of အရွယ်ရောက် ZR-1008 အတွက်အသစ်ချည်ထားသောဘဲလေး Leotard
အထည်: Splice:ကားကိုယ်ထည်: Nylon77% + Spandex23%
အရွယ်အစား: မိန်းကလေးများ (110-150); လူကြီးများ (၁၆၀-၁၈၀)၊ ထုံးစံ
အရောင်: အနက်ရောင်၊ ပန်းရောင်၊ Fuchsia, Burgundy၊ Lilac၊ ခရမ်းရောင်၊ အပြာ၊ အပြာ၊ အပြာ၊ အစိမ်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းပို့ရန်ကြာချိန်: 7-15 ရက်
ထုပ်ပိုး: PE အိတ် (အမှာစာအရေအတွက်နှင့်အညီအသင့်တော်ဆုံးအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ)
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်း။ ။ အမြန်လမ်းမကြီးကိုအထောက်အကူပြုသည်
ယူနစ် - လက်မ
မှတ်ချက် - ထည်သည် elastic ဖြစ်သောကြောင့်အရွယ်အစားသည်ရည်ညွှန်းမှုအတွက်သာဖြစ်ပြီး 1-2cm အမှားတစ်ခုရှိသည်။
တစ် ဦး ချင်းစီ၏အမှန်တကယ်အခြေအနေအရအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်သည်။
အရွယ်ရောက်သူများအတွက် New Tie-Dye Ballet Leotard ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း
၁။ OEM / ODM ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။ သင်လိုချင်သောမည်သည့်စတိုင်ပုံနှင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုများကိုမဆိုသင့်အတွက်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်သူများအတွက် New Tie-Dye Ballet Leotard ကို 2.- ရောင်းချပြီးနောက်
၃။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမှာစာနံပါတ်ကိုထုတ်ပေးသောအခါ၊ အမြန်ဆုံးသင့်ထံသို့ပေးပို့ပါမည်။
၄။ သူရောက်ရှိလိုသောနေရာသို့ရောက်သောအခါ၊ သင့်ထံငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုသတိပေးရန်ထပ်မံဆက်သွယ်ပါမည်။
၅. သင်လက်ခံရရှိပြီးနောက်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးပြproblemနာရှိပါကပြproblemနာ၏ပြင်းထန်မှု၊ အပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျော်ကြေးများအရသင်နှင့်ညှိနှိုင်းပါမည်။
အရွယ်ရောက်သူများအတွက် New Tie-Dye Ballet Leotard ၏ Q & A
Q1 ။ စိတ်ကြိုက်လိုဂိုလိုပါသလား။
A1 ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်ဘတ်ပေါ်၌သို့မဟုတ်အဝတ်နောက်ကျောရှိအမှတ်တံဆိပ်ကိုပူတံ၊ တံဆိပ်ခတ်။ ရေဆေးတံဖြင့်ကပ်နိုင်သည်။
Q2 ။ တစ် ဦး တည်းပစ္စည်းနှင့်ထုံးစံလုပ်အမြောက်အများကုန်ပစ္စည်းများများအတွက် ဦး ဆောင်အချိန်ကဘာလဲ?
A2 ။ ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုသံသရာသည် ၇ ရက်မှ ၁၅ ရက်ခန့်အထိ (တစ်လအတွင်းအပိုင်းအစ ၃၀၀,၀၀၀ အထိထုတ်လုပ်နိုင်သည်) ဖြစ်သည်။
Q3 ။ ကလေးအရွယ်အစားနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြားခြားနားချက်ကားအဘယ်နည်း။
A3 ။ ကလေးအရွယ်အစားမှာ ၁၁၀-၁၅၀ (XS-XL) အရွယ်၊ အရွယ်ရောက်သူ ၁၆၀-၁၈၀ (2XL-4XL) အရွယ်အစားဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ထည်ပိုမိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်အသားအရေကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်နံရံတပ်ဆင်ထားသည်။
Q4 ။ မျိုးစုံရွေးချယ်မှုရှိပါသလား စတော့ရှယ်ယာများရှိပါသလား
A4 ။ မျိုးစုံသောအရောင်များကိုထောက်ပံ့သည်။ သင်လိုအပ်သော "style-size-color" ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြနိုင်သည်၊ စတော့ရှယ်ယာကိုစစ်ဆေးပါမည်၊ စတော့ရှယ်ယာစတိုင်မရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အတွက်အရွယ်အစားနှင့်အရောင်ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
Q5 ။ ပုံဆွဲခြင်းများနှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသလား။ MOQ တစ်ခုလိုအပ်ပါသလား။
A5 ။ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားသောပန်းချီကားများကိုထောက်ပံ့သည် MOQ သည်အပိုင်း ၁၀၀ ဖြစ်သည်။
Hot Tags: အရွယ်ရောက် ZR-1008၊ ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူများ၊ တရုတ်စက်ရုံများအတွက် New Tie-Dye Ballet Leotard သစ်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ထုတ်လုပ်သူ
လည်စည်း - ဆိုးဆေးဘဲလေး Leotard
လေ့ကျင့်ရေး dance leotard စက်ရုံ
အရွယ်ရောက် ZR-1001 အတွက်အသစ်ချည်ထားသောဘဲလေး Leotard
အရွယ်ရောက် ZR-1007 အတွက်အသစ်ချည်ထားသောဘဲလေး Leotard
အရွယ်ရောက် ZR-1009 အတွက်အသစ်ချည်ထားသောဘဲလေး Leotard
အရွယ်ရောက် ZR-1010 အတွက်အသစ်ချည်ထားသောဘဲလေး Leotard
အရွယ်ရောက် ZR-1011 အတွက် New Tie-Dye Ballet Leotard
 Hubei ပြည်နယ်၊ Dangyang မြို့၊ အမှတ် ၇၀၊ Nanzheng လမ်း
© Copyright 2020-2021 Fitdance ဘဲလေးစက်ရုံ